Plates Nkwukọrịta - Imewe Mmewe
Nkwukọrịta Iji gosipụta ngalaba dị iche iche nke ụlọ nchekwa ngwaike Didyk Foto gbagotere na echiche iwepụta ha dị ka ọtụtụ efere nwere ihe dị iche iche nke ngwaike dị n’elu ha, jere ozi n’ụzọ nri. Nzụ ọcha na efere ọcha na-enyere aka mee ka ihe ndị ọzọ dị na ya pụta ma mee ka ọ dịrị ndị ọbịa ụlọ ahịa mfe ịchọta otu ngalaba. Ejikwa ihe onyonyo a na bọọdụ mita 6x3 na akwụkwọ mmado na njem ọha na ala Estonia niile. Ihe omuma ndi ozo di iche na ihe ndi ozo di mfe mee ka mmadu mara ihe banyere mgbasa ozi a.
Aha oru ngo : Plates, Aha ndị na-emepụta ya : Sergei Didyk, Aha onye ahịa : Didyk Pictures.
Nkwukọrịta Sergei Didyk Plates